सिर्जना भन्ने कुरा जहा भए पनि उस्तै हो – संगीत प्रशिक्षक नरेश श्रेष्ठ - Samadarshi Sanchar
सिर्जना भन्ने कुरा जहा भए पनि उस्तै हो – संगीत प्रशिक्षक नरेश श्रेष्ठ
समदर्शी संचार, बिहिबार, १० भदौ, २०७८, साँझको ०५:४४ बजे
संगीत प्रशिक्षक नरेश श्रेष्ठ, इलाम नगरपालिकामा संगीत प्रशिक्षण केन्द्र संचालन गर्छन – सुरताल विद्याललय । इलाम जिल्ला नाम्सालीङ गा.वि.स.वाड न. १ लालीखर्क गाउमा मिति २०४४ आश्विन २१ गतेको दिन माता सरिता श्रेष्ठ र पिता तिलनारायण श्रेष्ठमा कान्छा सुपुत्रका रुपमा जन्मनु भएका नरेश श्रेष्ठले आफ्नो पढाइलाई स्नातक तह पुरा गरेका छन् ।
प्रस्तुत छ हाम्रा प्रतिनिधि निर्मल दियालीले समदर्शी संचार अनलाईनका लागि गर्नु भएको कुराकानीः–
–संगीत क्षेत्रमा लाग्न कसरी प्रेरित हुनु भयो बताईदिनुस्न?
मलाई सानै देखि गीत संतिग प्रति झुकाब थियो । घरमा रेडियोबाट बज्ने गीत र सुगमधारका गीतहरु क्यासेटमा ल्याएर सुन्ने अनि विद्यालयमा हुने विविध कार्यक्रमहरुमा आफ्नो प्रस्तुतिहरु राख्ने गर्दथे । विद्यालयको प्रस्तुतीले गुरुहरु र साथीहरुको हौसला मिल्थ्यो र मेरो संगित प्रतिको रुचि अझै बडेर गयो जब २०६३को प्रबेशिका परिक्षा पछि उच्च बिक्षाको लागी इलाम बस्दै आए , इलाम ममरब क्याम्पसमा हुने कार्यक्रमहरुमा पनि सहभागी भए त्यसै समयमा इलामका त्यस समयका सास्त्रिय संगितका गुरु मणी बर्देबासग भेट भयो । त्यस पछि उहाबाटनै संगित शिक्षा लिन सुरु गरे । केहि समय पछि उहाले आफ्ने कार्यको शिलशिलाले गर्दा इलाम छोड्नु भयो ।र म बिर्तामोडमा रहेको सरगम संगितालयमा गुरु श्री दिपक रायमाझी र श्री आदरणीय गुरु कुवेश्वर राई सग शास्त्रिय सँगीत अध्ययन गर्दैछु।
–अहिेले सम्म के–कस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुनुभयो ?
२०६३ सालमा इलाममा भएको जिल्ला स्तरिय गायन प्रतियोगीतामा भाथ लिएर टपटेन सम्म पुुगे । त्यसबाट पनि मैले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाए । त्यस पछि आफ्नो सांगितिक ज्ञान बढाउनलाई सगित अध्यनलाईनै प्राथमिकता दिए । साथै सुरताल सगित विद्यालयका साथिहरु मिलेर गुरु मणी बर्देवाको एउटा सरगम नामको कलेक्सन एल्बम गरेका थियौ । उत्त एल्बममा मैले दिपा राईको रचना र मणि सरको सगितमा ‘‘भित्र भित्रै कुरा काट्छन्…’’ भन्ने बोलको गित पहिलो पटक रेकर्ड गराएँ । मणि सरले इलाम छाडे पछि सुरताल विद्याललयमा म नै प्रशिक्षण गराउदैछु त्यस्तै पुर्वाञ्चल भित्र हुने विविध सागितिक कार्यक्रमहरुमा सहभागी जनाउँदै आएको छु । केहि मेचि भित्र भएका गायन प्रतिस्पर्धाहरुमा निर्णायक हुने हवसर पनि पाएँ ।
–हाल सम्म के कति गितहरु रेकर्ड गर्नुु भयो ? तपाईले सगित गर्नु भएको गितहरु पनि छन् होला बताईदिनुस्् न।
‘‘भित्र भित्रै…’’ पछि हाल आएर दिपा राईकै शब्दमा अनि आफ्नै संगितमा ‘‘आँसु छ गहभरी’’ र शैलजा राईको शब्दमा र मेरै संगित र स्वरमा ‘‘जादैछु टाढा….’’ भन्ने बोलको दुई ओटा गितहरु रेकर्ड गरे। त्यस्तै चारओटा लोक गितहरु खड्ग श्रेष्ठको शब्दहरुलाई संगित गरेको छु । चारवटा मध्ये दुईवटा रेकर्ड भइसक्यो र दुईवटा रेकडिङको तयारीमा छ। अन्य केहि गितहरु पनि संगित गरेको छु ।
–हालको इमालको सांगितिक गतिविधिको बारेमा के भन्नुहुन्छ?
इलाम सुगम संगितलाई माया गर्ने ठाउ हो जस्तो लाग्छ मलाई ,साथै क्ष्लामले सुगमधारका जगदिस समाल ,कुबेर राई , राम दियाली , आदी जस्ता हस्तिहरुलाई जन्माएको छ ।तर पछिल्लो समयमा इलामको सुगम संगितको माहोल पछि परेको होकी जस्तो लाग्छ। संगित आफैमा गाह्रो छ। साथै निरन्तरताको आवस्यकता पनि पर्छ। आउने पुस्तालाई संगितको सस्कारको जरुरत छ साथै प्रस्तुती देखाउने ठाउका अभाव जस्ता कराहरु छन् । तथापी संगितलाई वर्षौ देखि निरन्तरता दिनेहरुको पनि अभाव भने छैन इलाममा । साथै केहि नया पुस्ताहरु पनि यस कार्यक्रममा सामेल भैसकेका छन।
–कलाकार हुन ठुलो ठाउमानै जाने चलन छ,तपाईत इलाममानै विद्यालय सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ नी, कसरी सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
ठुला ठाउमा अवसरहरु धेरै हुन सक्छिन् तर सिर्जना भन्ने कुरा जहा भए पनि उस्तै हो भनेको संगितमा रुचि भएका र यहि संगित सिक्न चाहनेहरुलाई यहिनै केही मैले जानेको सिकाउनु हो । सिक्ने इच्छा धैरैलाई भए पनि टाढा गएर सिक्न सबैको पहुच नहुन सक्छ , फेरी इलाममा अरु कुनै संगित सिकाउने संस्थाहरु पनि छौनन् । कम्सेकम यहि सिकाउने हो भने केहि न केही राम्रै हुन्छ । जस्तो लाग्छ मलाई । इलाममा संगितलाई केहि हद सम्म जोगाउने एउटा प्रयत्न हो मेरो ।